” पल्पसा क्याफे : एक भिन्न द्रिष्टिकोण | Social Sciences and Humanity Studies Academic Blog
Related article 1. Review of Palpasa Cafe
2. पल्पसा – पुरक एक पराकाष्ठाको
3. पुस्तक समीक्षा- प्रेमबाट
4. पल्पसा क्याफेको समीक्षा
« Media, Culture and Society
तपाईको ग्रल फ्रेन्ड छ की नाई ?? »
उजेली said, on January 23, 2009 at 6:55 pm
“होर्‍यार्इ-तेहेर्‍यार्इ पढ्‍नु पाठकको अभिरुचिभन्दा पनि कमजोरी साबित भएको छ भन्न गाह्रो नपर्ला ।”
यसमा अलि चित्त बुझेन ।
Book review चैँ एकदमै गज्जबको छ । पढ्न मज्जा आयो । पहिला ३ वर्ष अगाडि नै एकपटक यो पुस्तक पढ्ने विचार गरेको थिएँ अनि १-२ पेज पढेको पनि थिएँ । रमाईलो नै लाग्दैथियो खोइ के भएर पढ्न पाइनँ । शायद ११ कक्षाको जाँच भएर होला । त्यसपछि फेरि पढ्ने साइतै जुरेन । जे होस् एकपटक पढ्न चैँ मन लागेको छ यो किताब । अझ तपाईँले लेख्नुभएको यो लेखले त झन् पढ्नैपर्ने रै’छ जस्तो लाग्यो ।
shekhar said, on January 23, 2009 at 7:08 pm
तिमले ठिक भन्यौ जस्तो लाग्यो । मैले त्यो वाक्य लेख्दा अउला टाइप गर्न मानिरहेको थिएन । सायद कमजोरि शब्दको सट्टा वाध्यता लेख्दा ठिक होला की प्रवेश भाई ।
उजेली said, on January 24, 2009 at 4:39 am
त्यस्तो लेखेर हाम्रो पाठकलाई understimate पनि नगरिहालौँ । पहिलो पल्टमै बुझ्ने पनि धेरै छन् । त्यो लेखकको बहादुरीभन्दा पनि पाठकको असक्षमता हुने भएकाले त्यसलाई book review मा अलि ठाउँ नदिईहाल्ने पो हो कि ॥
आकार said, on January 24, 2009 at 9:30 am
आकार said, on January 24, 2009 at 9:32 am
Shekhar said, on January 25, 2009 at 3:42 am
आकार जी , लीङ्क राख्देकोमा आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
ametya said, on January 25, 2009 at 9:08 am
कथा लेख्नु ठुलो कुरा हैन, जो कोहि पनि लेख्न सक्ला! तर कथा कत्तिको जिवन्त छ , कुरा त्यहाँ भर पर्छ । वाग्लेको यो पल्पसामा सुरु र अन्त्य जुन प्रकारले गरिएको छ त्यसले कथालाई पुरापुर जिवन्तका साथै full intresting बनाएको छ । वाग्ले क्याफेमा दृश्यलाई पर्खनु बाट शुरु भएको उपन्यास जेमिनि पल्पसा खोज्दै वाग्ले समक्ष पुग्नु को जुन बनावट जुन मिलावट छ नि त्यो ज्यादै उत्कृस्ठ छ ।
अनि तपाईँ म जस्तै ढिलो हो कि के हो??? पल्पसा मैले जस्तै सबैले पढेर थन्क्याएपछि पढ्नु भएछ त??????
ametya said, on January 25, 2009 at 9:13 am
and by the way thanks for the link of my article in ur artilcle …but i think the title goes wrong…it’s
पल्पसा – पुरक एक पराकाष्ठाको not पल्पसा क्याफेको एक पुरक पराकाष्टा …..
पल्पसा – पुरक एक पराकाष्ठाको ==means Palpasa – पुरक (Alternate) of one पराकाष्ठा(JAM)
Whenever be jam, do open Palpasa to get rid from the hangover of jam…the title means that.
Shekhar said, on January 25, 2009 at 9:38 am
धन्यवाद । खास कुरो के भने नी “पल्पसा क्याफे मैले एक वर्ष अगाडी नै अध्ययन गरीसकेको थियो, र आफ्नो बुझलाई शब्दमा उतारीसकेको थिए तर त्यस लेखमा पर्याप्त समीक्षा गरेको थिएन । अहिले पर्याप्त विचारहरू जोड्न पाएकोले ब्लगमा पोष्ट गरेको हु ।
Nirajan said, on March 1, 2009 at 11:21 am
हाहाहा हाँसो उठ्यो । कसैको समर्थनमा यति अन्धो भएर नलेखौँ । तथ्य बुझेर मात्र लेखौँ । यो उपन्यासको जति प्रचार र समीक्षा कुनैको पनि भएको छैन । तत्कालीन कान्तिपुरका सम्पादक भएको भरमा यसको अत्यधिक प्रचार गरिएको थियो । कान्तिपुर टेलिभिजनले प्राइम टाइमको बुलेटिनमा मुख्य समाचार हेडलाइन बनाएको थियो यो पुस्तकको विमोचनको समाचार । अनि कान्तिपुरमा पटक पटक समीक्षा छापिएको थियो । कान्तिपुरका सम्पादक यसका लेखक नभएको भए यसको चर्चा शायदै यो ढंगबाट हुन्थ्यो र शायदै तपाईँले यो समीक्षा लेख्‍न जरुरी ठान्नुहुन्थ्यो ।
ashish said, on November 26, 2010 at 2:26 pm
this is the first upnayas i read which touch my heart i cant belive itsareal and true story .i would be thank ful to mr NARAYAN WAGLE for this upnayas .my heart melt after i read this upnayas .